बिजखबर संवाददाता २०७६ चैत ६ (March 19, 2020) मा प्रकाशित
नेपाली उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा परिचित नाम हो रामचन्द्र संघई । ८० वर्ष पुरानो व्यवसायिक घराना त्रिवेणी समूहको विरासतलाई अघि बढाइरहेका संघईले समूहमा रहेर सिमेन्ट, धागो, बैंक, फाइनान्स, इन्सुरेन्स, जलविद्युतदेखि विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका छन् ।
आफ्नो नामले भन्दा पनि कामले चिनिन चाहने संघईले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई)मा डेढ दशकसम्म केन्द्रीय समितिमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । एफएनसिसीआइको आगामी कार्यसमितिबाट नेतृत्वमा आगमनको तयारी गरिरहेका संघई एफएनसिसीआईलाई राजनीतिक नभई व्यवसायिक मुद्दामा अघि बढाउन आफु पुनः नेतृत्वमा आउन चाहेको बताउँछन् ।
एफएनसिसीआईमा आफुजस्तो लामोसमयदेखि उद्योग र व्यवसाय बुझेको व्यक्ति नेतृत्वमा आउन आवश्यक रहेको बताउने संघई एफएनसिसीआई उद्योग व्यवसायीको लागि भएको र यसले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका मुद्दा उठान गर्नेमात्र हैन कि समाधान नै गर्नुपर्छ भन्छन् ।
एफएनसिसीआइको आगामी कार्यसमितिका लागि एसोसियटतर्फ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका त्रिवेणी समुहका निर्देशक संघईसँग महासंघको निर्वाचन, उम्मेदवारी तथा उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बिजखबर डटकमका लागि सन्तोष पोख्रेल र रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
महासंघको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । महासंघको नेतृत्वमा आउने चाहना किन गर्नुभयो ?
महासंघ सबै उद्योगी व्यवसायीका लागि एउटा साझा थलोको रुपमा रहेको छ । यहाँ हामी हजारौं व्यवसायीहरु सामूहिक रुपमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको ‘Betterment’का लागि काम गर्छौ । हाम्रो प्रयास देशको उद्योग व्यवसायको विकास, सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धनका लागि हो ।
देशको उद्योग व्यवसाय फष्टाउनु वा राम्रो हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा जानु हो । सबल अर्थतन्त्रले नै देश समृद्ध बन्ने हो ।
यसरी हेर्दा हरेक उद्योग व्यवसायीले देशका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका हुन्छन् । हो यही योगदानलाई राज्यले पहिचान गरोस्, उपयुक्त वातावरण श्रृजना गरिदिओस र उद्योग व्यवसायीका लागि उचित नीति तथा व्यवस्था होस भनेर हामीले राज्यसँग लविङ गर्ने हो । नेतृत्व भनेको त्यसैका लागि एउटा टीम हो ।
वास्तवमा महासंघका हरेक सदस्यको सबै पक्षमा उत्तिकै योगदान हुन्छ । तर, हजारौं सदस्यहरु एकैपटक डायलगमा जान त सक्दैनन् । तर, नेतृत्वले ती सबै सदस्यको भावना, चाहना, आवश्यकता र समस्याहरुलाई बोकेर सम्बन्धित पक्षसम्म पुरयाउंछ र सबैका लागि काम गर्छ । यस्तो टीम पक्कै पनि अनुभवी, कुशल र सबैको भावना बोक्न सक्ने हुनुपर्छ ।
यही विषयलाई मध्यनजर गरेर नै मलाई महासंघको उपाध्यक्षमा आउनुपर्छ भन्ने महसुस भयो । मैले नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेको छु र बुझेको पनि छु ।
महासंघमै पनि २० वर्षदेखि आवद्ध छु । अब मेरो अनुभव र क्षमतालाई पनि मैले नेतृत्वमा रहेर नेपालको उद्योग व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायी साथीहरुको हितमा लगाउन सक्छु भन्ने लागेर नै उम्मेदवारीको घोषणा गरेको हुँ ।
तर, यहाँको उम्मेदवारी त ढिलो घोषणा भयो, कसैको चाहनामा त उम्मेदवार बन्नु भएको होइन नि ?
मलाई त मेरो उम्मेदवारी घोषणा ढिलो भएजस्तो लाग्दैन । अझै पनि निकै समय छ । अरु साथीहरुले चाँडो उम्मदेवारी घोषणा गरेकाले मैले ढिलो उम्मेदवारी घोषणा गरेको जस्तो लाग्यो होला । तर, मलाई म ढिलो भए कि भन्ने लागेको छैन् र अर्को कुरा मेरो उम्मेदवारी कसैको चाहनामा पो हो कि भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसमा अलिकति पनि सत्यता छैन् ।
म एफएनसिसीआईमा हिजोअस्ति आएको मान्छे पनि हैन् । म बीसौं वर्षदेखि महासंघमा छु र डेढ दशकभन्दा बढी त केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरिसकेको छु । अर्कोतिर हेर्नुस, म एउटा लिगेसी बोकेको त्रिवेणी समूहको सदस्य हुँ ।
जसको नेपालको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमै ८० वर्षको इतिहास छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने म बोलेर भन्दा पनि काम नै गरेर आफुलाई सबैले चिनुन् भन्ने चाहन्छु ।
आजको मितिसम्म हामीले गरेको कामले नै हाम्रो यो क्षेत्रमा रहेको योगदान स्पष्ट हुन्छ । जुन हाम्रो इतिहास र वर्तमान छ, त्यसले नै स्पष्ट हुन्छ कि म कसैको चाहनामा वा दवावमा उम्मेदवार बन्ने मान्छे होइन भन्ने कुरा । यसलाई मैले त्यति धेरै स्पष्ट पारीरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तर, महासंघमा त विभिन्न चुनावी तालमेल, प्यानल र पक्षहरु पनि देखिन्छन नि ?
पक्कै पनि यी विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । तर, महासंघ भनेको व्यवसायिक संस्था हो । यहाँ हुने गतिविधि पनि व्यवसायिक नै हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ । अब चुनावी तालमेल, प्यानल र पक्षहरुको कुरालाई पनि नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन् जस्तो लाग्छ ।
महासंघमा रहेका सबै सदस्यहरुका लागि महासंघको विधानअनुसार नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर हुन्छ । यस्तोमा जोसुकैले पनि म महासंघमा रहेर काम गर्न सक्छु भन्ने चाहना राख्छ भने उ अगाडि आउन पाउनुपर्छ । चुनाव नेतृत्वका लागि नै हुने हो । नेतृत्वमा जान चाहनेहरु धेरै भएपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चुनिन्छ ।
यसक्रममा पक्ष–विपक्ष, प्यानल भएको जस्तो देखिन्छ । तर, मुख्य प्रतिस्पर्धा त एजेण्डामै हुने हो । एउटा एजेण्डामा मत मिल्नेहरु एकातिर हुन्छन भने अर्को एजेण्डामा मत मिल्नेहरु अर्कोतिर हुन्छन । यसले प्यानल बनेको देखिन्छ । जुन चुनावी प्रक्रियासम्म मात्र रहन्छ ।
चुनाव हुँदा पनि र सकिएपछि पनि हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरु एउटै छातामा रहन्छौं । तर, एउटा ध्रुवसत्य कुरा के हो भने जुनसुकै एजेण्डाले जिते पनि त्यो महासंघकै लागि र उद्योगी व्यवसायीकै हितका लागि हुनुपर्छ । हामी व्यवसायीले महासंघमा गएर पनि व्यवसायिक ढंगले काम गर्न सक्यौ भने त्यसले समग्रको हित हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
तर, यहाँ आफ्नो समुदायबाट बाहिर आएर उम्मेदवारी दिनुभयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
यसमा मलाई त त्यस्तो लागेको छैन् । अर्को कुरा महासंघमा समुदायको कुरा पनि केही छैन् । महासंघमा त समुदायको भन्दा पनि उद्योग व्यवसाय बुझेको व्यक्ति आउनुपर्छ ।
सक्षम र उपयुक्त नेतृत्व आउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबैको एकमत छ । म पनि यही बिचार बोकेर अघि बढेको छु ।
यहाँको चुनावी तयारी कस्तो छ ? केही रणनीति बनाउनुभएको छ कि ?
पक्कै पनि तयारी त चलिरहेकै छ । पहिलो कुरा त म आन्तरिक रुपमा सबैसँग परामर्श र छलफलपछि मात्र उम्मेदवारीका लागि तयार भएको हुँ ।
चन्द्रजीले महासंघलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन एउटा उपयुक्त टीम बनाएर जाने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
महासंघमा लामो समय रहेर काम गरेको मेरो अनुभव, उद्योग व्यवसायको क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीसँगको मेरो सम्बन्धले पनि मलाई महासंघको नेतृत्वका लागि तयार गरेको हो ।
अहिले हामी महासंघमा एउटा दरिलो, बलियो र सक्षम नेतृत्वका लागि सबैसँग परामर्श गरेर अघि बढिरहहेका छौं । सबै साथीहरुले उत्साह थपिरहनुभएको छ ।
रोजगार परिषदको सभापति पनि हुने हुनाले महासंघमा यो पद निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो भूमिकालाई कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ ?
एसोसियट उपाध्यक्ष निकै जिम्मेवारीपूर्ण पद हो र यो पदमा रहेर न्याय गर्न सक्छु भन्ने विश्वासका साथ नै म अगाडि आएको हो ।
रोजगार परिषदको सभापतिको नाताले सरकार, उद्योगीदेखि श्रमिकसम्मका विषय हेर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा नयाँ श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ऐनहरु लागु भएका छन, तिनको कार्यान्वयन सवै पक्षको हितमा हुनेगरि प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ
म पहिलेनै रोजगारदाता परिषदको उपसभापतिको रुपमा पनि काम गरिसकेको नाताले पनि यो भूमिकामा रहेर सबैको हितमा काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ । सरकारसँग उपयुक्त रुपमा समन्वय गर्दै श्रमिकहरु समेतको हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।
केही एजेण्डाहरु नै तय गर्नुभएको छ कि ?
एजेण्डाको कुरा गर्दा हाम्रो मुख्य एजेण्डा नै महासंघलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने हो । महासंघ सबल, व्यवसायिक, सक्षम र प्रभावकारी भयो भने यसले सबै सदस्यहरुको हितमा काम गर्न सक्छ । अहिले यो–यो एजेण्डा भनेर तोक्नुभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीका वर्तमान समस्यालाई हल गर्ने र आगामी समयका लागि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने हो ।
मेरो अहिलेको एजेण्डा उद्योगी व्यवसायीका लागि सहुलियतपूर्ण सरकारी सेवा शुल्कको विषयमा सरकारसँग विशेष पहल गर्ने, औधोगिक एंव व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकहरुको विश्वासलाई थप मजबुद बनाउँदै देशमा औधोगिक वातावरण कायम राख्न निरन्तर सक्रिय रहन प्रतिबद्ध छु ।
अर्को मेरो मुख्य एजेण्डा भनेको सरकारसँग हामीले राख्दै आएका जुन मागहरु तथा मुद्दाहरु छन् ती विषय समाधान गर्ने हो । हामी लामो समयदेखि समाधानको लागि पहल गर्ने भनिरहेका छौं । अब पहल हैन समाधान नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा हो ।
उद्योगी व्यवसाायीको हितलाई नै मुख्य रुपमा हामीले महासंघमा रहेर प्रवद्र्धन गर्ने जुन काम छ त्यसलाई मेरोतर्फबाट थप प्रभावकारी बनाउन लागिपर्नेछु । अर्को कुरा म आफै पनि एउटा उद्योगी व्यवसायी भएको नाताले यो क्षेत्रमा के–के समस्या छन् भन्ने विषयमा म राम्ररी जानकार छु । सबै उद्योगी व्यवसायीका समस्या उस्तै प्रकारका हुने भएकाले पनि मलाई महासंघमा रहेर के काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा राम्ररी बुझेको छु । त्यसैले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधानको दिशामा लान सक्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
तर, महासंघमा चुनावसम्म म महासंघलाई समय दिन्छु भन्ने र चुनाव जितेपछि चाहिं आफ्नो व्यवसायमा मात्र ध्यान दिने र महासंघलाई समय नै नदिने भन्ने आरोप पनि छ नि ? यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यस्तो गुनासो होला पनि । तर, म त यही क्षेत्रमा रहेको मान्छे हुँ । मेरो पनि समस्या आउँछ । महासंघ नै त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने प्लेटफर्म हो, जहाँ बसेर नै हामीले व्यवसायिक पहल गर्ने हो । म आफैं उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भने म महासंघबाट टाढा जाने भन्ने कुरै हुँदैन् ।
हामी जो उद्योग व्यवसाय गरिरहेका छौं, उनीहरु महासंघबाट बाहिर रहन नै सक्दैनन् । अब नेतृत्व भनेको त थप दाायित्व पनि हो र त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सक्छु भनेर नै हामीले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो ।
यहाँको महासंघमा बिजयका आधारहरु के–के छन् ?
पहिलो कुरा त म उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको छु । जसले महासंघमा रहेर यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा काम गर्न सक्छ भन्ने सबैलाई जानकारी छ । महासंघमा रहेर महासंघलाई थप सुदृढ र सामयिक बनाएर अघि बढाउन मेरो भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ भन्नेमा मैले सबैको विश्वास हासिल गर्नेछु । यही नै मेरो जीतको आधार हो । अर्कोतर्फ अहिले हामी जुन टीमको कुरा गरिरहेका छौं । त्यो टीमपनि हाम्रो जीतको आधार बन्नेछ ।
महासंघ अहिले सबै उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधिमुलक संस्था भनिएपनि ठूला उद्योगीहरुको हितमा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने आरोप छ नि ? महासंघ सानादेखि ठूला सबै उद्योगी व्यवसायी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
पक्कै पनि यस्तो गुनासोलाई हामीले सुनुवाई गर्नैपर्छ । महासंघ सबैको साझा संस्था हो भन्ने महसुस गराउने काम नेतृत्वले गर्ने हो र गर्नैपर्छ । संस्थाले ठूला–साना भन्दा मुद्दाहरुमा रहेर काम गर्ने हो । हामी नेतृत्वमा आएपछि हामीले महासंघका सदस्यहरुको समस्या के छन्, मुद्दाहरु के छन् भन्नेमा केन्द्रित हुने हो ।
म आफैं ठूला, मझौला र साना सबै प्रकारका उद्योगहरु चलाइरहेको छु । त्यसैले पनि म सानो ठूलो भन्नेमा कुनै फरक सोच्दिन । मेरो धारणा के हो भने महासंघमा रहेका सबै सदस्यहरुको लागि महासंघले काम गर्नुपर्छ र हामी त्यो गर्छौ । देशमा ठूला, मझौला र साना सबै प्रकारका उद्योगहरु चाहिन्छन् ।
अहिले महासंघ आपसी द्धन्द्धमा रुमलिंदा एकढिक्का भएर सरकारसँग आफ्ना मुद्दाहरुमा पनि लविङ गर्न सकेन भन्ने सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
मलाई अहिले पनि महासंघ एक ढिक्का नै छ भन्ने लाग्छ । केही कमजोरी छन् भने सुधार गरेर थप सुदृढ गरेर जाने कुरा हुन्छ । महासंघ हाम्रा अग्रज तथा पूर्वअध्यक्षहरुले एउटा जुन प्लेटफर्म निर्माण गर्नुभएको छ, यो निकै महत्वपूर्ण र ठूलो प्लेटफर्म हो ।
यसका लागि म उहाँहरु सबैलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ र हाम्रो नेतृत्वले महासंघलाई थप सुधार गरेर सुदृढ बनाएर अघि बढने कुरामा हामी प्रतिबद्धतासमेत् जनाउँछौं । कसैको महासंघका सम्बन्धमा गुनासो, असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई पनि समाधान गरेर, सम्बोधन गरेर र समेटेर हामी अघि बढछौं ।
अहिले देशको औधोगिक वातावरण कस्तो छ ? लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय स्थिर सरकार र सरकारले पनि आर्थिक विकासलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि औधोगिक क्षेत्रमा उत्साह बढ्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ उद्योगहरु स्थापना भएका छन् । कतिपय उद्योगहरुले उत्पादन क्षमता बढाइरहेका छन् ।
स्वदेशी–विदेशी लगानी बढिरहेको जस्तो लाग्छ । सरकारले औधोगिक वातावरण थप मजबुत बनाउन अझै केही कामहरु गर्नुपर्छ । हामीले पनि यो वातावरणलाई बलियो बनाउँदै लाने र लग्नुपर्छ । अहिले विद्युतको उपलब्धतासँगै उत्पादनको क्षेत्रमा केहि सुधारको संकेत देखा परेको छ ।
चुनौति पनि थपिदैं छन् मूलत हालैमा मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोग समक्ष औधोगिक क्षेत्रमा झण्डै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको विद्युत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।
यसले झण्डै १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुन गई निर्यात घट्न जाने एवं्म व्यापार घाटा बढ्ने देखिन्छ । एकातिर हामी औद्योगिकरणको कुरा गरिरहेका छौं भने अर्कोतिर यस्तो कदमले मुलुकमा हाल सञ्चालित उद्योगहरू धराशायी भई बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् जसको कारण देशमा बेरोजगारी बढनेछ ।
एकातिर ने.वि.प्रा.ले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भएको र आगामी दिनमा बजार खोज्नुपर्ने भनिरहँदा अर्कोतर्फ सम्पूर्ण व्यवसायिक घरानालाई भार पर्ने गरी विद्युत महसुल वृद्धि गर्ने प्रस्ताव जानु आफैमा विरोधाभाषपुर्ण देखिन्छ । तसर्थ यसलाई हामी सबै मिलि सम्बोधन गर्नैपर्छ र यसमा मेरो अग्रसरता रहनेछ ।
औद्योगिक वातावरण थप राम्रो र अनुकल बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने केही छ कि ?
अझैपनि कतिपय उद्योगहरुमा बिजुलीको समस्या छ । त्यसलाई हल गर्न सकेमात्र पनि थप उद्योग स्थापना र बिस्तार तथा उत्पादन वृद्धि हुनेछ । अर्कोतर्फ सरकारले अहिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भनेको छ । यसलाई सफल पार्न निर्यात उद्योगहरुलाई थप सहुलियत, सहज नीति र सरकारी सहयोग चाहिन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बैंक ब्याजदरमा सहुलियत, प्रशासनिक कामकारवाहीमा थप सरलता ल्याउनसके औधोगिक वातावरण अरु राम्रो र अनुकुल बन्नेछ ।
त्रिवेणी समूह अहिले कसरी अघि बढिरहेको छ ? भविष्यमा कसरी अघि बढने् योजनामा छ ?
त्रिवेणी समूह ८० वर्ष पुरानो व्यवसायिक घराना हो । एउटा इतिहास बोकेको हाम्रो समूहले अहिले सिमेन्ट उद्योग, धागो उद्योग लगायत विभिन्न उद्योग, जलविद्युत, बैंक, फाइनान्स, इन्सुरेन्सदेखि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं ।
आज हामीसँग हजारौं कर्मचारी, एवंम श्रमिकहरुले काम गरिहनुभएको छ । देशको रोजगारी, राजश्व र उत्पादनमा हामीले महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छौ । समयअनुसार हामी थप लगानी वृद्धि एवंम उत्पादन वृद्धिको योजना बनाएर अघि बढिरहेका पनि छौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन अनिश्चित कालका लागि स्थगित
सरकारको निर्देशनसँगै आजै महासंघको पदाधिकारी बैंठक बस्दै, चुनावी मिति जेठ पहिलो हप्तालाई सर्ने
महासंघमा माथिल्लो निकायको निर्देशन भन्दै चुनाव सार्न चलखेल, गृह सचिव भन्छन्–कुनै छलफल र निर्देशन भएको छैन
महासंघ निर्वाचनमा ढकाल र प्रधान प्यानलसहित मैदानमा, कस्को कति पल्लाभारी ?
महासंघमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी, यस्ता छन् प्रतिस्पर्धी